Pablo Nuñez: «Usarega chero munhu achirega kuedza kutsikisa» | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo: Pablo Nuñez. Facebook nhoroondo.
Paul Nunez, munyori weLugo we nhoroondo yenhau, munyori wemazita akadaro Vanasikana vaKesari, Mbavha dzeNhoroondo o Mambokadzi mutambo, ndipe izvi indavhiyu kwaanotiudza nezve zvese zvishoma nezve ake mabhuku, zvinofurira, mapurojekiti uye yekutsikisa uye yemagariro panorama yatinogara mairi. Ndinokutendai zvikuru nguva yakashandiswa uye mutsa wako.
Pablo Nuñez - Bvunzurudzo
PABLO NUÑEZ: Ehe, nekuti ini ndichiri kuichengeta sepfuma: Iyo nhema corsairrakanyorwa naEmilio Salgari. Pakati peavo vaive nevabereki vangu pamba, zvakatotora pfungwa dzangu kubva pazera diki kwazvo, kunyangwe ndisati ndaverengera.
Chinhu chekutanga chandakanyora chaive nhetembo muchiGalician, uye ndinoramba ndichizviita nekuti Ndinoda nhetembo. Asi iyo yekutanga nyaya ... Ichakushamisa iwe, asi chokwadi ndechekuti yaive Vanasikana vaKesari.
PN: Hondo nerunyararo, ivo Tolstoy, nekuti yakandipinda mune imwe nhanho yekuverenga pane iya yandaive nayo kusvika panguva iyoyo. Ini ndaive nehanya ne (inoenderera ichidaro) yeiyo adventure nano. With Hondo nerunyararo Ndakawana rwechipiri rwekunyora rudo, rwakagadzirirwa mune izvo zviitiko nenzvimbo zvakazonyorawo Nhoroondo.
Uye zvakare, nekuwedzera kwayo, Ndaifarira kuongorora kekutanga iyo zvirongwa, shanduko dze nhanho, the mavara uye nemunyori akavaka sei madhairirano ... Muchidimbu, zviri mukati mebhukukunze kwekunakidzwa kunoshamisa kwekuiverenga.
PN: Nekuda kwekubva kwangu - ndinobva kuLugo - ndakaverenga zvakawanda muGalician. Rosalia, Castelao, Manuel Maria, wandakafarira kusangana naye. Kana Emilia Pardo Bazan, uyo anoratidzika kwandiri semunyori anoshamisa.
Uyewo Verne, Salgari, Dumas, Twain... Uye mPedyo: Tom Clancy, Bernard Cornwell, Umberto Echo, nevaSpanish vaviri vane hushamwari hwakanyanya hunondibatanidza. Manel Loureiro naJuan Gómez-Jurado. Kusangana zvese zviri zviviri chave chimwe chezvakanakisa zvipo hupenyu hwandipa.
Sezvauri kuona, hazvigoneke kuti ini ndinamatire kune mumwe munyori. Uye ini ndinotadza.
PN: Maviri. Mukadzi Arwen de Ishe wemhete, nekuti Tolkien akaviga makiyi mazhinji maari, kunyangwe "achimuvanza" semunhu wechipiri. Genius zvinhu.
Y Jack RyannaClancy. Ryan anga ari mumaoko angu mumanovel emusiki wake, uye pamafirimu neterevhizheni. Iye zvino zvakare mune akateedzana.
PN: Ini ndinoda kuve padhuze chimwe chinhu chine chekuita nezvandinonyora, munondo, mari, mamapu kana mifananidzo yemasetingi ayo vatambi vandinogadzira vachararama zviitiko.
PN: Zve nyora, in imba. Ndakazviedza mune dzimwe nzvimbo uye ndinoziva kuti kune avo vanozviwana chero kupi. Ini handina kukwanisa kuzviita.
Leo zvakawanda mumusha mangu, hutiziro hwangu, pamahombekombe erwizi Miño, uye ndinoda kuverenga pamahombekombe. Ndakave nenguva, ndichienderana nedzidzo dzangu uye kushandisa nguva kusvika ndapinda kunodzidzisa, mandiri ndakaburitsa bhuku muhomwe mangu ndokuverenga kwekanguva pamadziro. Chokwadi ndechekuti ndinochisuwa… Makandipa zano.
AL: Iko kushuva kwevaRoma nemaCelt mune enganonyorwa dzako kunobva kupi?
PN: ndinobva Lugo (uye ini handizvirambe, sekutaura kwedu pano). Moyo weguta rangu wakambundirwa kwemakore zviuru zviviri ne rakasarudzika rusvingo rweRoma munyika uye Nzvimbo Yemagariro Enyika. Pane zvakawanda zvakawanikwa zvekuchera matongo zvakawanikwa, izvo zvichiri kuwanikwa uye zvakavanzika nezvakavanzika zvinovakomberedza.
Asi dzimwe nguva tinokanganwa izvozvo zvisati zvaitika uyai Roma, paitovepo budiriro netsika mauto asati asimbisa mutemo wavo. Galicia muenzaniso wakanaka weizvi. Isu takakomberedzwa hill fors, yezvakawanikwa kubva panguva iyoyo yapfuura, uye izvo zvaigara nemukadzi mukuru weRoma mhumhi.
Ini ndaigara ndichikwezvwa nekutsvaga ruzivo uyezve nyora nezvehukama hwaive netsika mbiri. Ikoko ndakawana mbeu ye Vanasikana vaKesari.
La ukama kesken Galicia nedzimwe nzvimbo dzekuMadokero kweEurope senge Ireland, England, Scotland, Wales o Brittany es inonakidza kwazvo uye isu takabatanidzwa nehukama hwakawanda, yedu nhoroondo, tsika, mimhanzi ... Uye mazhinji ngano zhinji. Kubva ipapo Mambokadzi mutambo, iyo yakasarudzika "Celtic."
Zvakare muLugo tinopemberera, kuita mutero uye tibatanidze vanhu vakavaka nzvimbo yedu nekwatakabva, pati, Lucus anopisa (tsvaga internet kana pasocial network), izvo zvakakwezva vanhu vanopfuura hafu yemiriyoni mune mamwe ma edhisheni.
Con vanhu vanobva kumativi ese epasi, kubva kumakona mazhinji eSpain, kuenda kuIreland, France kana kuItari ... Inenge chero nyika muEurope ine mumiriri wakakura wePortugal, asi gore rega rega tinoshamiswa nevashanyi Latin America, Honduras, Mekisiko, Argentina, Taiwanese kana kunyange australia. Kana kubva China, nekuti rusvingo rwedu rwakapetwa neGreat Wall uye Lugo pamwe neguta reQuinhuangdao. Denda rakatimisa, asi tichadzoka.
Nezvose zvandiri kukuudza, uye zvandakasiya mupombi, zvirokwazvo unonzwisisa kuda ikoko zvirinani.
PN: Iyo thriller. Uye ipapo isu tine muna Juan wechokwadi shasha. Chinhu chinoshamisa ndechekuti haasi muAmerican, handiti?
PN: Ndichangopedza Gonhi, naLoureiro, novelon. Ndine Bindu remuroyi, naClara Tahoces, uye White mambo.
Ini ndinonyora, asi inononoka pane zvandaida. Iyo yakaipa streak yekurasikirwa nemhuri iyo yakandiomera kuti ndibude. In inotevera Ini ndinodzoka kuzotora maRoma, ndiani andiudza kuti vandisuwa.
PN: Zvakaoma kwazvo. Asi kwete nekuda kwenhamba yevanyori, paigara paine, uye netarisiro isu tichave nekuwedzera uye nekuti zvichareva kuti vana vedu vanoverenga. Pasina iyo, haugone kunyora.
Ndinokuudza imwe ruzivo rwako pachako. Sezvandakambokuudza, chinhu chekutanga chandakanyora chaive Vanasikana vaKesari, Ndakaitumira ku Planet Mubairo, vasina sirogani uye vasina kunyepedzera, uye vakandiisa pakupedzisira. Pakati pezvinyorwa zvinopfuura mazana mashanu kubva pasi rese. Ndosaka ndichiti hapana chinokona hapana anomira kuyedza kutumira. Tarenda rinoguma rawana musuwo kana hwindo, asi rinovawana.
Chinhu chakaoma chiri mumamiriro azvino. Isu takanga tichipora kubva mudambudziko rapfuura uye zvino kupenga uku. Kana ikatibata isu tese, vaparidzi vanotamburawo, vatengesi vemabhuku, vanogovana, maprinta ... Iyo yese yekutsikisa uye yekutengesa cheni yebhuku rinotambura dambudziko repiri, inotonyanya kutarisirwa uye ine hutsinye, asi chokwadi, HURE, kuti tinobuda mazviri. Fara.
PN: Ehe iri. Mhuri yangu uye nharaunda, ndinofungidzira kuti sei imi mose, shamwari uye vatinoshanda navo vakatambura kwete chete dambudziko rehupfumi, asiwo dambudziko rehutano, nevanhu vanorwara, uye zvinosuwisa, kukuvara.
Ini, Ndinofanira kupotera munyaya dzandakanga ndatogadzira kare. Zvishoma zvasara zvenguva yazvino izvo zvandinogona kunyatso kuratidza sechinhu chakanaka, asi hongu, chinhu chakakosha kwazvo kwandiri padanho rekunyora Izvo udza mashoko nevaverengi Ndicho chinhu chakanakisa chakaitika kwandiri kubva pandakaburitsa, uye mune ino nyowani-yepasi nyika, mameseji ako, rutsigiro rwako runokosheswa kupfuura nakare kose. Ndatenda, uyezve iwe unogona zvakare kuvimba neni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Pablo Nuñez: "Ngaparege kuva nemunhu anomira kuyedza kutsikisa"
Mabhuku anotyisa kwazvo